दुई दिन भित्र त’पाईं’को काम बन्नेछ , पूरा पढी ॐ लेखेर से’यर ग’र्नुहोला ! – Kantipur Np
दुई दिन भित्र त’पाईं’को काम बन्नेछ , पूरा पढी ॐ लेखेर से’यर ग’र्नुहोला !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २४, २०७७ समय: १८:१९:१३
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना सानासाना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।
शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छआखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो ।
Last Updated on: April 6th, 2021 at 6:21 pm